NaKristu rokudzora China | Apg29
Pane zvazoitika mu China zvichida vakawanda havana kuuya - icho kudzora maitiro zvichida hapana akagona kufungidzira.
Hatifaniri here neizvi kudzora mamiriro, iyo yava Chinese vanomanikidzwa kugara. Imhaka nokuti zvakakwana chete mufananidzo kuti shoko rouprofita akatipa fungidziro.
Kuti pfungwa iyi, tarisa mifananidzo kuti isu aiswe pano. The Mifananidzo miviri chidzitiro nenzvimbo dzokurasira kubva SVT kuti Document yakavakirwa izvo aired musi 7 October.
600 miriyoni makamera
Panoperera chirongwa SVT kwakaratidzwa sei kudzora mamiriro rinoburitsa zvose izvi Chinese vanhu, kana kufamba, bhasikoro kana kutyaira motokari - hapana kutiza. The gadziriro iri kare yakatanga zvakanaka, uye rinenge gore, achava China kuti vakawanda iri kuongororwa ne pedyo mamiriyoni 600 (!) Cameras.
China Credit Social anonyora kuti ino achabvumira vagari vakavimbika vachidzungaira takasununguka mudenga, ndichireurura zvakaomera vanotambura kuti vakwanise kutora imwe danho. Vanogona kunze zvachose munzanga.
Zvino vezvenhau munyika vakatanga uchimuka kuti chii chiri kuitika China. Mune Swedish TT nyaya, yakabudiswa mumapepanhau siyana muna October, iwe nyora pamusoro chokwadi vanhu Chinese ikozvino kurarama ne:
"Round wachi richiona nezvezvabuda ibatanidzo chiso kuzivikanwa, mashoko pachisara paIndaneti mabasa uye zvoupfumi maitiro. Kushandisa algorithms uye kwevanhu chipingaidzo count hwomunhu nemagariro chikwereti ukoshi kumusoro, mamakisi ari akagadziridzwa panguva chaiyo uye rwakakosha kuti nomumwe uye mhuri yake. "
Tapota verenga izvi zvakare! Zvinogona kuoma kuwana, chokwadi kuti tinofanira kunzwisisa. Apa pane kutaura ipapo pamusoro kuteverwa mumashure siku nesikati!
Vakanyorwa mune pfungwa ino
Uyezve, zvose zvakanyorwa mune pfungwa ino, inova "inokosha nokuda nomumwe uye mhuri yake." Izvi zvinoreva kuti kwete chete kunokanganisa munhu, asiwo mhuri yose.
Munhu anenge aigara China dzinoshuma kuti zvinozivikanwa zvikuru kuti rinokosha Hardware akaiswa zvose Chinese dzeserura. Nenzira iyi, zviremera teererai zvaunotaura paunotaura parunhare.
Kuwedzera kuti, vakuru vave atangawo kunyora inzwi mimwe vagari. Saka zvinoita kuti tikwanise kuziva avo vari kutaura kana munhu anoteerera.
VaKristu vaigara yakaoma kuzvidzora
Kubva nemaonero echiKristu, vourawa vaKristu atova zvakaoma chaizvo kugara kudzora ichi. Ko Chinese hurumende ipapo kwavo muviri simba kuwana vagari vakavimbika, unogona kutenda kwechiKristu kunyange kurambidzwa. Panozova pasina chinetso zviremera kuti asava vose kubva mashandiro munzanga, uye nokudaro haikwani kurarama upenyu.
An maitiro Anti-echiKristu kudzora ndiani achaidya kunotenga uye kutengesa, chinorondedzerwa muna Zvakazarurwa chitsauko 13 kuti mhedziso, rava chaicho.
Kana munhu ane mubvunzo kuti izvi zvichafa chinozoiswa kana kuti mari dzinowanikwa kuita zvino panguva ino, unogona ikozvino kudonhedza kusava nechokwadi kwavo. Zvino yava nguva kumuka uye kumisa vachiramba uprofita zvebhaibheri.
Kuzadzika kurondedzera kwouprofita
Kunyange zvakawanda akakodzera kutanga kudzidzisa nokuparidza pamusoro ichi, saka kuti vaKristu vose vari kuva aiziva sei kure tauya mukuzadzika kurondedzera kwouprofita inowanikwa muBhaibheri.
Zvino kuti Panyanzvi vezvenhau inosimbisa chii iripo kare uye rinoshandisirwa, hazvifaniri kuva zvakaoma vabvume vaKristu uye vasiri vaKristu nezveBhaibheri shoko rakavimbika.
Chinonyanya kukosha ndechokuti kugamuchira Jesu kwavo muponesi pachavo saka murege kuva nedambudziko kwaAntikristu uye utongi hwake. Zvinokosha kukosha isingagumi!